Maxay tahay sheekada ku qarsoon dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya? – Hornafrik Media Network
Maxay tahay sheekada ku qarsoon dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya?
By HornAfrik	 On Aug 7, 2018
Hornafrik-Waxaa la boobay meharado, kaniisadana waa la gubay ayadooyna foowdo hareeysay gobolka 2 aad ee ugu weeyn ismaamulada etobiya, ka dib markii ciidamdu fedaraalku gudaha u galeen biloowgi todobaadkaan, taasoo kicisay xiisad siyaasadeed.
Ciidamada Federaarka Itoobiya ee galay Xarunta DDS ee Jigjiga ayaa qorshahoodu ahaa ineey soo taxaabaan hogoomka deegaanka taa oo keentay qalalaasaha ku fiday magaalooyin kale oo dhoowra iyo isku dhacyo dhex maray ciidamada iyo booliska DD.
Xiisadda ayaa ku biilabay beegsi dadka aan soomaalida aheeyn iyadoona la gubay labo kaniisad oo qaddiimiya. In kastoo Md Federaalka itoobiya aaysan cadeeyn sababta dhabtaa ee ciidamdu ugaleen gobol hadana Wasiirka difaaca itobiya oo hadlay ayaa yiri “ kama aaamusi doonno foowdada iyo qalalaasaha taagan waxaana qaadi doonaa talaabo dastuuriya.”
Xaaladda cakiran oo ee ka jirta gobolka soomaalida itoobiya waxaay noqoneeysaa mushkiladdii ugu weyneyd ee uu gudaha ka wajaho Rw Abiy Ahmeh. Tan iyo markii uu awoodda la wareegay Mr abiy bishii tagay ee Apri waxa uu dhex muquuranayay moowjado rajo ah oo aay ka dhex muuqdaan danaha qaranka iyo kuwa gobolka geeska afrika.
Balse hanaanka federeeshinka Itoobiya eek u saleeysan qoowmiyadaha oo wehliso kala go’naanta dagaanada, ayaa waxaa jira shaqaaqoyin u dhaxeeya Bulshooyinka Oromada ee uu Rw kasoo jeedo iyo soomaalida, xalkeeda ayaana ah caqabada ugu adage e aay wajahayo maamulka cusub talada haya. Waxaa jira walaac ah in xiisaddu isu rogto dagaal qoowmiyadeed iyo mid diimeed.
Waxaa arinta sii cusleeyay maadaama Cabdi Maxamiid Cumar lagu eedeeyay ineey galay gabood falo ka dhana xuquuqda aadanaha intii xilka jooga taaso ah mid ka hor imaaneeysa siyaasada cusub ee Dr abiy waxana horaan jeelasha laga sii daayay dad farar oo isu jira siyaasiyiin, wariyayaal.
Xalay ayuu is casilay Md DDS waloow wali uu yahy guddoomiyaha xisbiga talada haya taasoo farta lagu godayo in wali uusan jirin isbadal buuran uusan dhicin mucaaradkuna waxaa aaminsanyihiin soomalidu isu timaad oo aaya hooda ka tashato maamulka talada hayana uu gogosha dhigo.
Axmed Cabdi Maxamed waa 32jir waxa uuna ku dhashay degmada Garbo ee Gobolka Fiiq ee Dowlad deegaanka Soomaalida. waa aqoonyahan wax ka bartay Jaamacadaha Diridhaba Iyo Bahirder.
waxa uu soo noqday madaxa maaliyadda magaalada Godey, Duqa degmada Qabri-daharre, Wasiirka Maaliyadda ee maamulkii Cabdi Maxamed Cumar oo aay saaxiibbo dhw yihiin.
Kasakoow inuu yahay nin dhalinyara Md lama oga waxa uu ka badali karo xaaladda cakiran ee ka jirta dd waxaana wali taagan rabshado.
Sarkaal Shabaab ahaa oo dowladda isu soo dhiibay , aqriso sheekadiisa!
Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay Khilaafka Sacuudiga iyo Canada!